‍Monday,7March 2022 ﻿
Greetings to Esteban Volkov at 96: lifelong defender of Trotsky’s legacy
Today is the birthday of the grandson of Leon Trotsky, Esteban Volkov. Over the course of his life, Volkov has fought to preserve the historical truth about Trotsky’s life and work, against the smears of the Stalinists and bourgeois historians. In particular, Volkov has preservedaunique monument to Trotsky’s legacy: the Leon Trotsky House Museum in Coyoacán, Mexico, which was once home to Volkov and his grandparents, Natalia Sedova and Leon Trotsky. On the occasion of his birthday, the International Marxist Tendency would like to send revolutionary greetings to this lifelong champion of Trotsky’s legacy.
本文件于 2014 年 12 月在乌克兰的亲欧盟运动 （Euromaidan） 运动、顿涅茨克和卢甘斯克的起义以及俄罗斯吞并克里米亚之后撰写。当时，国际马克思主义趋势（International Marxism Tendency）参与发起了声援乌克兰反法西斯抵抗运动（Solidarity with Antifascist Resistance in Ukraine ，SARU）。与此同时，一些所谓的马克思主义组织向反动的乌克兰民族主义投降了。因此，为乌克兰民族问题的历史发展提供一些背景，是当下重要的任务之一。本文探究了这个民族问题的一些方面，包括布尔什维克的政策、列宁在 1922年苏联成立时的政策，以及托洛茨基在 1930 年代后期采取的立场。应结合2014 年 8 月国际马克思主义趋势世界大会通过的“乌克兰提纲”阅读。（按：本文原文公开发表于2022年2月10日。由网友energized_entity翻译发表于此。经我方发现后自行校对，重刊在此。）
Rus devrimi öncesi, sirasi ve sonrasinda kadinlar
Bolşevizmin tarihi, kadın sorununa nihai çözümü sağlayacak olanın sınıf mücadelesi olduğuna dair zengin derslerle doludur. Marie Frederiksen bu makalede , Bolşevik Parti’nin onun ilk günleri, devrim süreci ve iktidarı ele alışı sonrasındaki süreç boyunca kadın sorununa yaklaşımını inceliyor.
ပဋိပက္ခကို အရှိန်မြှင့်တင်လိုက်တဲ့ ပူတင်
Jorge Martin and Fred Weston တို့ရေးတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့က ဆောင်းပါး “Ukraine: Putin ups the ante by recognising the Donbas republics and sending in troops” ကို ဘာသာပြန် ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးစဉ်က ယူကရိန်း တပြည်လုံးကို ရုရှားစစ်တပ်တွေ ဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး၊ ဒွန်းဘတ်(စ်)ဒေသကိုပဲ ရုရှား စစ်တပ်တွေ ဝင်ရောက်ထားသေးချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်တွေက အချိန်တိုအတွင်း တဟုန်ထိုး ဖြစ်ပေါ်သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဖြစ်ရပ်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်က အကျိုးစီးပွားတွေကို နားလည်ဖို့၊ ဘာ့ကြောင့် ဒီအခြေဆိုက်ခဲ့သလဲ ဆန်းစစ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် အခုဆောင်းပါးက အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆပြီး ဘာသာပြန် ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အယ်ဒီတာ့မှတ်ချက်။
Ukrayna'da Savaş. Enternasyonalist, sınıfsal bir konumlanış! IMT beyanı
Savaşın ilk zayiatı hakikattir. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi için de geçerlidir. Tüm yalanlara ve savaş propagandasına rağmen, Marksistler bu çatışmanın gerçek nedenlerini analiz etmelidir. Bu çatışmayı ne tetikledi? Burada yer alan çeşitli tarafların resmi menfaat tasvirlerinin arkasında yatan asıl çıkarları nelerdir? Ama her şeyden önce bu savaşa uluslararası işçi sınıfının çıkarları açısından yaklaşmalıyız.
အဲဗားဂရန်ဒီ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း ပြိုလဲလာခြင်း နှင့် တရုတ် လက္ခဏာဆောင်သော အရင်းရှင်စနစ် (2)
အရင်းရှင်စနစ်ကျင့်သုံးပြီးတဲ့နောက် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာ ထိပ်တန်းရောက်လာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံဟာ အခုဆိုရင် စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာကို တွေ့လာရပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းက‌တော့ တရုတ်ရဲ့ အကြီးဆုံး အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းစုကြီး Evergrande က ပြိုလဲခါနီး အခြေအနေမှာ ရောက်နေပြီးအကြွေး ကန်‌‌ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဘီလီယံကျော် တင်နေပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်က ၂၀၀၇-၀၈ ခုနှစ်က အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဘဏ်ချေးငွေဂယက် ( subprime mortgage crisis ) နဲ့ အဖြစ်ချင်းတူနေပါတယ်။ ဒါ‌ကြောင့် အခုနှစ်မှာ တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်က အမေရိကန်တို့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ပြဿနာမျိုး ကြုံတွေ့နေရပြီး အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့ ဘေးကျပ်နံကျပ်ကာလအတွင်း ရောက်ရှိနေပါတယ်။
Bản gốc tiếng Nga của bài viết này được phát hành ngày 23/4/2020 tại trang web 1917.com nhằm mô tả chế độ cuar Putin tại Nga: nó đã ra đời như thế nào, có những đặc trưng gì, và nó có những khác biệt cơ bản ra sao so với các chế độ tư sản truyền thống mà chúng ta biết ở phương Tây.
Xung đột ở Ukraine: liệu đây là khởi đầu của Thế chiến III?
Alan Woods (chủ bút trang marxist.com) cung cấp một cập nhật về tình hình ở Ukraine. Kể từ khi cuộc xâm lược của Nga, chiếc đập chắn tuyên truyền đã được các phương tiện truyền thông Phương Tây bơm xả, góp phần vào bầu không khí điên loạn tột cùng, với những tờ báo giờ đây la hét thất thanh về mối đe dọa của Thế chiến III. Giữa lúc ấy, các lãnh đạo đế quốc tiếp tục thể hiện sự đạo đức giả đáng ghê tởm khi họ kết tội Putin ‘vi phạm chủ quyền quốc gia của Ukraine’, họ chưa từng bao giờ ngăn chặn chiến tranh nhằm theo đuổi lợi ích của riêng mình trong quá khứ. Những người Marxist phải bác bỏ thông điệp yếm thế ‘yêu nước’ và ‘đoàn kết dân tộc’, khi chúng ta tiếp tục phản đối giai cấp thống trị chính của chúng ta ở mọi quốc gia.